Inona no tokony hataoko ? – Tsodrano
Jaona Mpanao Batisa dia nilaza amin’ireto vahoaka ireto hoe. « Tsy isika ireto ihany no acteurs eto amoron’i Jordana fa misy hafa koa, izay avy aoriako ka Izy no mitana ny rôle principal. Io ilay Mpamonjy tadiavinareo Izaho manao Batisa anareo amin’ny rano fa Izy hanao batisa anareo amin’ny Fanahy Masina sy ny afo. Ilay Fanahy izay handoro ny tsy metitsika rehetra. Hanpotipotika antsika dia ilay isika taloha. Tsy izany fa raha tohizatsika dia nambarany fa hikororoka ny vary Izy ka hanavaka ny vary amin’ny akofa sy ny mololo Toa manery atsy koa izany hikororoka ny fiainatsika ka hanavaka sy handoro ny tsy mety rehetra : ny fitiava-tena amin’ny tena fitiavana ny tsy rariny amin’ny fahamarinana, ny tena fiandrasana ny Tompo sy ny fetifety fotsiny sns…. Fa raha izay no hataotsika dia hahita ny Tompo tokoa isika amin’ity Noely 2009 ity